‘राष्ट्रपतिज्यू, ज्ञानी र असल भन्दै हत्यारालाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ ?’ « Janata Samachar
बुटवल। २०६८ सालमा जेलभित्रै चितवनका शिवप्रसाद पौडेलको हत्या गरेका मानिसलाई प्रजातन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आममाफी दिइएपछि पौडेलकी पत्नी बिनु रायमाझी पौडेलले राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएकी छन् । बिनुले मान्छे मारेर जेल परेका व्यक्तिलाई ज्ञानी र असल भनेर उन्मुक्ति दिन मिल्छ राष्ट्रपतिज्यू ? भन्दै प्रश्न गरिरहेकी छन् ।
पौडेलको हत्यारा प्रमाणित भई जेल सजाय भोगिरहेका फणीन्द्र श्रेष्ठ, सुनिल केसी र दिलबहादुर मोक्तानलाई प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा फागुन ७ गते आममाफी दिइएपछि बिनुले न्यायका लागि फेरि लड्ने बताएकी हुन्।
‘मेरा पतिका हत्यारालाई के आधारमा जेलबाट छोडियो ? आफ्नो पार्टी फुट्यो, कार्यकर्ता कम भए भनेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले हत्यारा प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिहरूलाई जेलबाट निकाल्ने ? यो देशमा न्याय, कानुन केही छैन ? के अब म पनि मेरा पतिका हत्यारालाई मारेर जेल जाऊँ ? अनि म आबद्ध पार्टीको सरकार बन्यो भने आममाफी लिएर फर्किऊँ ? छातीमा हात राखेर सोच्नुस् त तपाईंहरूलाई स्वीकार्य हुन्छ ? मान्छे मारेपछि सजाय भोग्नुपर्दैन ? दुई-दुईजनाको हत्या गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ राष्ट्रप्रमुखले ?’ यसरी बिनुले राष्ट्रपतिमाथि प्रश्नको वर्षात गरेकी छन् ।
२७ वर्षको उमेरमा बिनुले पति गुमाउनु परेको थियो । चितवनको केराबारीमा भएको एक व्यक्ति हत्या मुद्दामा उनका पति २०६८ भदौमा जेल परेका थिए। परिवारका सदस्यले त्यो हत्यामा उनलाई फसाइएको दाबी गर्दै आएका छन् । थुनछेक बहसका लागि कारागार चलान गरिएका शिवलाई मंसिर २० गते राति सुतिरहेका बेला चक्कु, खन्ती, चापाकलको झाप र रडले कुटपिट गरिएको थियो।
कुटपिट लगत्तै गम्भीर अवस्थाका पौडेललाई चितवनकै सरकारी अस्पताल लगिएको थियो। चिकित्सकले त्यहाँ उपचार नहुने भनेपछि पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि लगियो र केही दिनपछि काठमाडौं लगियो। तर पुस २ गते उनलाई मृत घोषणा गरियो। जेलभित्र भएको उक्त घटनाबारे अहिले पनि जेल र अस्पतालका कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी खुलेर बोल्दैनन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।